Maxkamadda Sare Ee Kenya oo Sharciyaysay Guushii Uu Kenyatta Ka Gaaray Doorashada. – Shabakadda Amiirnuur
November 20, 2017 9:38 am by admin Views: 65
Maxkamada sare ee dalka Kenya ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamtay dacwadii ka dhan aheyd natiijadii doorashadii ku celiska aheyd ee uu mar kale ku guuleystay Uhuru Kenyatta. Lixda garsoore ee dhageysanaysay dacwaddan ayaa isku raacay laalida guusha Kenyatta iyagoo meesha ka saaray eedaymaha la soo jeediyay.
Go’aankan ayaa waxaa uu waddada u xaarayaa in Kenyatta mar kale xilka loo dhaariyo Todobaadka soo socda. Maxkamadda oo la unkay Sanaddii 2010 ayaa bishii September waxba kama jiraan ka soo qaaday natiijadii doorashadii Agosto dalkaasi ka dhacday. Laaakiin Kenyatta ayeey neef farxadi ka soo booday kaddib markii ay maxkamadu ogolaatay inuu isagu kusoo baxay doorashada.
Laakin siyaasiyiinta dalka Kenya oo ay soo xiganayeen qaar kamid ah wakaaladaha wararka ayaa sheegay in tani ay ka dhigan tahay Kenya oo sii kala guureysa, iyagoo sidoo kale sheegay in xisbiga Juballii ee Uhuru ay caqabado badna kala kulmi doonaan xisbiga Naasa ee Rayle odinga.
Kenya ayaa waxa kale oo ay wajahaysaa xaalad amni kadib markii ay iyadu lugaha la gashay dagaal aaney natiijadiisa ka fiirsan, dagaalkaas oo dhaxalsiiyay qalqal iyo dhaqaala darri baahsan.